कथा : कोभिड-19 को महामारीले लुटेको उमङ्ग – NawalpurTimes.com
कथा : कोभिड-19 को महामारीले लुटेको उमङ्ग
प्रकाशित : २०७७ कार्तिक २९ गते ११:२४
सन २०२० को जनवरीमा चिनको वुहान सहरबाट माहामारीको रुप लिएको भाईरस कोभिड-१९ बिश्वब्यापीरुपमा फैलियो । कोभिड कहर अब त सकिएला , अब त सकिएला भन्दा भन्दै झन्डै ८ महिना पछि दशै आयो । बर्ष दिनको चाड भएर होला खुशी नै छुट्टै हुने । वाह ! कस्तो रमाइलो हुने भो यो पाली जापानबाट मामा माइजू पनि आउनुभएको छ भन्दै मन फुरुङग पार्दै कार्तिक ७ गते काठमाडौबाट नवलपुर हानियौ । कोरोनाको त्रास भएतापनी समग्रमा दशैमा निकै रमाइलो गरि टीका लगाईयो । कार्तिक १२ गते फ्रन्टलाईन वोर्कर रहेकी मेरि नर्स दिदिले फोन गर्दै ” नानी मैले ८ गते पिसिआर टेस्ट गराएको थिए , मेरो रिपोर्ट पोजिटिभ आयो नि ” भन्नुभयो म त छागाबाट खसे जस्तै भए । “त्यसै मजाक नगर्नुस न दिदी सिरियस कुरामा ” भन्दै झर्किए । ” हैन आई एम सिरियस , कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङमा तिमि पनि पर्यौ, अब हप्ता दिन छुट्टै बस्नु अनि पिसिआर टेस्ट गराउनु । भगवान संग प्राथना गर्छु , म त कोभिड पोजेटिभ भैहाले , तिम्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आओस् ।
यो पटक दिदिको प्राथना भगवानले सुन्नुभएन । कार्तिक १७ गतेको रिपोर्ट अनुसार म पनि कोरोना सन्क्रमित भएछु । हलुका रुघा लागिरहेकै थियो पछि को ५/६ दिन सम्म रुघा खोकी ज्वोरोले सताईरह्यो , खानाको स्वाद पनि थाहा पाउन सकिन । दिनमा २/३ पटक बाफ लिने गर्ने गरेको छु । बाबाले बेलुका सधै “यो हर्बल जुस हो है पिहाल छिटो ” भनेर ढोकामा ग्लास राखिदिनुहुन्छ । त्यसैले होला रुघाखोकी ज्वरोबाट चाडै मुक्त भए । कोठामा दिउसोभरी बस्दा बस्दा निकै बोर फिल हुन्छ । धन्न ईन्टरनेटको सुबिधा छ र दिन कटाउन सजिलो भएको छ । दसैपछी कवारेन्टाईन , आईशोलसन बस्दा बस्दै तिहार आईसकेछ । देउसुरे भैलोको आवाज , चारैतिरको झिलिमिली , दियोको उज्यालो , लक्ष्मी पुजा , सप्तरङ्गी टीका , सयपत्रि र मखमली फुलले मेरो मन सानै हुदा जितिसकेको भएर होला बच्चै बाट तिहार एकदम मन पर्थ्यो । काग तिहारको दिन कागलाई खाना दिन होस् या कुकुर तिहारमा कुकुर पुजा गर्न , गाई तिहारमा गाई पुजा गर्न , अबिर र केशेरीमा सयपत्री फुल डोबेर गाईलाई टाटेपाटे बनाईदिन मेरो हात सधै अगाडि जान्थ्यो । लक्ष्मी पुजा गर्नका लागि रङ्गोली युटुबमा भिडियो हेर्दै खुबै बनाउन ट्राई गर्थे ! यो पटक सबै परिवार बाट टाढा रहेर हेर्नू सिवाय केही गर्न सकिन ।
“लक्ष्मी पसुन यो घर भित्र
सरस्वती पसुन मुखमा
आशीष हाम्रो लागोस है राम्रो
नपरुन कोहि दुखमा ” रेडियोमा यो गित सुन्न लागेको ३/४ दिन भयो । गित बजुन्जेल ” हे भगवान अबको मेरो रिपोर्ट नेगेटिभ आओस , मेरो फेभरेट फेस्टिभल हो के तिहार ” भन्दै यहि मेरो आडमा भगवान भए जस्तै गरि आफ्ना कुरा सुनाउछु । फ्रेस हुन साझपख छततिर जान्छु कार्तिके चिसो हावा , पट्काको आवाज , गमलामा भएका मखमली र सयपत्री फुल , चारैतिरको झिलिमिली , हेर्दाहेर्दै रमाउन खोज्दाखोज्दै आखाभरी आँसु भरिन्छन । पोहोर सालको तिहारको फोटो अनि भाईलाई तानी तानी खुट्टा ढोगाएको , टीका बाङ्गे बनाईदियो भन्दै रिसाएको कैद भिडियो हेर्दै मुस्कुराउछु ।
झ्याल बाट मलाई जिस्काउन भाइ पहिले खुबै आउथ्यो । सायद संगै झगडा गरिगरी घर सफा गरेको , गिफ्ट किन्न बजार गएको झिलिमिली लगाएको यादले भाईलाई पनि सताईरहेको भएर होला । केही दिन यताको बिहान सधै ढोकामा आएर “आइसक्यो के तिहार आज हस्पिटल जानु न के था रेपोर्ट नेगेटिभ पो आउँछ कि ? निन्याउरो अनुहार बनाउदै , तिहारमा दिदिभाई भएर टीका लगाउन पाईन्छ कि भन्ने झिनो आशा देखाउछ । अनि खै के सोच्छ र भन्छ “४ मंसिरमा गर्ने है नेक्स्ट टेस्ट दिदी?? केही छैन म सबै सामान यहाँ ल्याईदिन्छु हजुरले ईन्टरनेटबाट भएपनि टीका लगाईदिनुस । जमाना कहाँ बाट कहाँ पुगिसक्यो केके सुबिधा आईसक्यो । यो तिहार को गिफ्ट हजुर छिट्टो कोभिड फ्री अनि बाबा मामु हामी सेफ हुने है ” भनेर मलाई सम्झाउदै हास्छ ।
एउटै छानो भित्र भएर पनि ईन्टरनेटबाट दिदिभाई टीका लगाएपछि कोभिड पोजेटिभ तिहार यादगर बन्ने भो मेरो । सधै यस्तो हुदैन होला नि , मेडिसिनल साईन्टिस्टले भयाक्सिन बनाउन आफ्नो हन्ड्रेड पर्सेन्ट ईफोर्ट लगाईरहेकै छन । अ साच्ची नाईन्टी पेर्सन्ट प्रोटेक्सन : कोभिड भ्याक्सिन भन्ने निउज पढेको ३/४ दिन मात्र भयो । कोभिड इन्डको बेगेनिङग भईसकेको छ । यो साल सुरक्षीत भएर भएर टीका लागाएपछी , रमाइलो गरि तिहार मनाउन अर्को बर्ष त छदै छ नि । म जस्तै आईशोलेशनमा रहनुभएका सबै जना आफू र आफ्नो दाजुभाइ दिदिबहिनीलाई खुशी बनाएर सुरक्षा अपनाएर तिहार मनाउनुहोला । स्टे सेफ एन्ड बि ह्याप्पी। सबैलाई तिहारको शुभकामना ।